Ulo Okpuegwu Ugwu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ulo Okpuegwu Ugwu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 19 Ngwaahịa maka Ulo Okpuegwu Ugwu)
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Uhie
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Uhie Osisi ndị a kpụ ọkụ n'ọnụ ọhụrụ a bụ onye gị na ya zuru oke na ski ski na skating. Na batrị 4500mah, enwere ike ịgba ụgwọ maka ihe karịrị ugboro 500. Mmetụta atọ maka nhọrọ gị. Nkọwapụta Ngwaahịa: akpụkpọ ụkwụ aka + azụ nke plam Ọkwa atọ na-achịkwa okpomọkụ...
Mgbochi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka anu ulo na Winter
Nkọwapụta ngwaahịa Mpempe akwụkwọ oku a na-achịkwa onwe anyị na nkà na ụzụ ọhụrụ nke PTC bụ imebe ka anụ ụlọ gị na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Na-achịkwa nke ọma. A na - eji ihe na - adịgide adịgide, na - eguzogide mmiri, na anụ ọkụ na - ekpo ọkụ iji jide n'aka na akwa adịghị anabata mmiri ma nọrọ jụụ. Ezubere maka...
Okpukpo Ugwu Okpukpo Umu nke ndi mmadu nwere otu njikwa
Okpukpo Ugwu Okpukpo Umu nke ndi mmadu nwere otu njikwa Mmiri a na-arụ ọrụ mmiri na-eguzogide ọgwụ ga-enye ọtụtụ awa nke nchekwa, ogologo okpomọkụ ikpeazụ. N'iji nhicha ahụ dị ọkụ 3.7V, ogwe aka ga-enye okpomọkụ n'ime ogologo mkpịsị aka ọ bụla. Mkpịsị aka ahụ e wusiri ike na-eme ka ọ dị ezigbo mma kama ọ...
Ngwongwo Ngwongwo nke Igwe Ngwurugwu nke Na-akpu Ala
Ejiji nke na-adịghị ala na-eti nri maka nri ịkụ Kedu uru ndị dị na ịwụnye usoro ụlọ ala anyị dị ala? Ọ dị mfe iji wụnye Ntugharị dị mfe ma gbanwee Kwesịrị ekwesị iji mee ihe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mkpuchi ọ bụla n'ala A na-enweta ya n'ọtụtụ dịgasị iche Ngwá ọrụ ọkachamara nke ọrụ ọkụ ọkụ na-arụ...
Ulo Na-eme Ka Ugwu Na-eme Ka Ugwu Na Na Na Na Na
Ulo Na-eme Ka Ugwu Na-eme Ka Ugwu Na Na Na Na Na Mmiri na-agbaze snow na ice bụ usoro kpo oku nke na-ekpo ọkụ glycol site na netwọk nke pipụ dị n'èzí n'okpuru ihe ọ bụla site na ụgbọala na ụzọ ụzọ na patios na ọdụ ụgbọ mmiri na-edebe ha n'enweghị snow na ice. Uru & Uru - Egwuregwu Egwuregwu Snow Snow...
Egwurugwu Igwe Egwuregwu Infrared AC220V Na-ekpo ọkụ
Egwurugwu Igwe Egwuregwu Infrared AC220V Na-ekpo ọkụ A na-ejikarị ihe nkiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ihe maka Sauna Room nke dị ọkụ, ihe nchekwa ahụ, ahụ ọkụ ọkụ ahụ, ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe nkiri okpomọkụ, ihe nkiri okpomọkụ na-ekpo ọkụ infrared, ihe okpomọkụ okpomọkụ infrared...
Ngwurugwu ohuru ohuru nke kpochapu ahihia nke Sauna
Nkọwapụta ngwaahịa Nke a bụ ụzọ ọzọ a ga - esi kpo oku .Ọdịmma ihe ọkụkụ anyị dị iche na kpochapụla ọkụkụ. Ndị na - achọpụta ihe ọkụkụ a na - ekpo ọkụ, ihe mgbagwoju anya ya dị elu karịa ihe ndị kpo oku nke nwere ike ịdị na - 99% .Ọ bụrụ na ọ na - banye n'ime ahụ gị ma mee ka ọkpụkpụ ọbara dị elu nke dị mma...
Ulo Okpuegwu Ugwu UL na-egwu egwu Amazon egwu egwu Okpokoro Ogwu Ogwu Ulo kpochapu UL Ihe ngosi egwu egwu Okpukpo Ugwu elu Sauna na-egwu egwu